Iirhafu zenzala ezichaphazela abaThengisi be-Forex -Funda nge-2 yoRhwebo
Inzala yeRhafu ifuthe njani kubarhwebi be-Forex
1 October 2019 | Ukuhlaziywa: 5 October 2019
Ngaba abarhwebi be-Forex kufuneka babakhathalele malunga namaxabiso amaNzala? Ewe.
Ngokwesiqhelo, inzala ephezulu inyusa ixabiso lemali lelizwe xa kuthelekiswa namazwe anika inzala ephantsi. Inqanaba lenzala yemali ngokuqinisekileyo yinto ebaluleke kakhulu emisela ixabiso elibonwayo lemali.
Utshintsho kumgangatho wenzala luchaphazela kakhulu intengiso ye forex. Utshintsho luhlala lwenziwa yenye yeebhanki ezisibhozo zehlabathi. Utshintsho lwenza iimpembelelo kwangoko kwifayile ye- Abarhwebi beemarike Kungoko ke ukuqonda indlela yokuphendula kunye nokuqikelela ezi ntshukumo kuya kuba phakathi kwamanyathelo okuqala okwenza inzuzo ephezulu.
Kubathengisi bemini, amaxabiso enzala kwimarike yemali ibaluleke kakhulu kuba, ngenqanaba eliphezulu lokubuya, inzala ethe kratya ifunyenwe kwimali etyalwe, eguqulela kwinzuzo ephezulu. Nangona kunjalo, ukuhla nokunyuka kweemarike kuphela komngcipheko kwaye kunokubathintela kakhulu ekuboniseni inzala.
Ungayibala njani iRhafu
Ngokwesiqhelo, iibhanki eziphambili zonyusa amaxabiso ukulawula ukunyuka kwamaxabiso kunye nokusika amaxabiso kumzamo wokukhuthaza ukubolekwa kwemali kunye nokuvumela imali kuqoqosho lweli. Ngamanye amaxesha unokuxela nantoni na enokugqitywa yibhanki ngokujonga nje izalathi ezifanelekileyo ezinje ngamanqanaba engqesho, isalathiso sexabiso labathengi (i-CPI), intengiso yeprprime, inkcitho yabathengi, kunye nentengiso yezindlu.
Amandla esihlobo, kunye nobuthathaka bezo zikhombisi, zibonelela nje ngesishwankathelo esigqwesileyo samandla ezoqoqosho. Njengoko izikhombisi ziphucuka, noqoqosho luya kusebenza kakuhle, kwaye amaxabiso aya kuphakanyiswa okanye agcinwe ngokufanayo ukuba ukuphuculwa kukuncinci.
Ngaphandle koko, kunokwenzeka ukuba uqikelele isigqibo sezinga ngokuhlalutya uqikelelo kunye nokubukela izaziso ezibalulekileyo.
Izibhengezo ezinkulu xa izinto ezintle zinokulandelwa ngokubanzi ngabarhwebi abalindele ukuba iFederal Reserve inyuse iirhafu, kwaye ngenxa yoko banerali yexesha elifutshane.
Ukuhlalutya uqikelelo ikwayindlela yokuqikelela izigqibo zenqanaba lenzala, kwaye ngenxa yokuba kulindelwe, iibhanki, iiarhente zabarhwebi, kunye nabarhwebi abaqeqeshiweyo, banokuqikelelwa kwemvumelwano.
Ireyithi yokumangala Ngamanye amaxesha iyenzeka
Abahwebi banokwenza olona phando luphambili, kodwa ngamanye amaxesha iibhanki eziphakathi zinokuthi zinciphise izinga lokunyuka okanye ukunyuka. Ke ngoko, nangaliphi na ixesha imeko ezinjalo zisenzeka, umrhwebi kufuneka abenolwazi kwaye aqonde umkhombandlela ukuba awulandele.
Ngamaxesha okunyuka, imali iyayixabisa intsingiselo yokuthengisa enokuyithenga, kwaye xa kunqunyulwe, abathengisi mhlawumbi bayathengisa emva koko bathenge ezo mali ngexabiso lenzala ephezulu.
Emva kokumisela intshukumo yentengiso, kubalulekile ukuthatha amanyathelo ngokukhawuleza njengoko isantya sibalulekile xa kusothuka, kwaye ngokwenza njalo, inzuzo ephezulu inokufumaneka. Kananjalo, kulungile ukuba ujonge ukubuyela umva kwimeko eguqukayo.
Inye into eqinisekileyo, ukuba imali ayinamsebenzi okanye ayinalo ulwalathiso, kodwa ngenqanaba lokunciphisa inzala okanye umyinge, imarike ayizinzanga - uphando luhlala lubalulekile ngaphambi kwalo naluphi na urhwebo.
Xa iibhanki zichonga umgaqo-nkqubo wazo wezemali, amaxabiso e-forex nawo ayahamba, kwaye xa behamba, abarhwebi bafumana ithuba lokwenza inzuzo ephezulu. Ke ngoko, ayisiyongqondo kubarhwebi ukuba bahlalutye iintshukumo zeebhanki eziphambili kwaye balandele ukukhutshwa kweendaba. Ukuphendula kwinqanaba lokumangalisa elihamba ngesantya kuya kuphucula kuphela amathuba omrhwebi wenzuzo ephezulu.
Idiphozithi $ 250 yokufumana iiFree Free Forex Signals zonyaka omnye!
Fumana imiqondiso yeVIPIdiphozithi $ 250 yokufumana iiFree Free Forex Signals zonyaka omnye! Urhwebo kwi-MT4 ngeXabiso ukuya kuthi ga kwi-1: 500!